सिमा बिबादबारे ट्रम्पले बल्ल मुख खोले, मोदीलाई नै यतिसम्म भनेपछि भारतभर हंगामा — Imandarmedia.com
१सरकारलाई एकै दिन ४ झड्का
२थप २४४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,कति भए डिस्चार्ज ?
३प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो ठूलो धक्का
४पूर्व माओवादी नेता रायमाझीले आफू कुन पार्टीमा छु भन्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सिएपछि…
५प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको प्रक्षेपणः प्रधानमन्त्री देउवा कि माधव नेपाल ?
६गायक पशुपति शर्मा ए’क्कासी अस्पताल भर्ना; केछ स्वास्थ्य अवस्था ?
७४८ घण्टामा क्यान्सर ठीक पार्ने चामत्कारिक औषधि तपाई पनिअनिवार्य थापा उनुहोस
८बाबुराम भट्टराईको यस्तो एक ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला
९बाढीपहिरोमा परी अहिलेसम्म २२ बेपत्ता यति धेरैकाे मृत्यु, बल्ल खुल्याे यस्ताे रहस्य
१०जसपा यी नेता भए आउट यस्ताे छ कारण
११मेलम्चीमा राहत वितरणमा यस्ताे लफडा, बाढीपीडित बसेको ठाउँमा प्रवेश निषेध
१२माओवादी र प्रचण्डलाई छाडेर बादलले ओलीलाई नै साथ दिने गरे यस्ताे निर्णय
२पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै माओवादी केन्द्रले गर्यो यस्तो निर्णय, नेता कार्यकर्ता चकित
३वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी अर्को रिट लियर सर्वोच्चमा, प्रधानमन्त्री तनाबमा
४नेपालीलाई खुसीको खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई गर्दैछ यति ठुलो सहयोग
५सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध जाने एमालेको निर्णय, सुवास नेम्वाङले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
६संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले दियो यस्तो आदेश
७इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जंगिएपछि कड्किए महान्यायाधिवक्ता
८नेपालमा भएको संसद विघटनबारे भारतले कस्तो प्रतिक्रिया दियो ?
९बल्ल आयो राष्ट्रिय जनमोर्चाको कडा प्रर्तिक्रिया
१०किन दियो डब्ल्युएचओले यस्तो कडा चेतावनी ? विश्वभर त्रास
११आफैले जिताएका मनाङेले अहिलेसम्मकै ठूलो धोका दिएपछि गुरुङले खोलिदिए यस्ताे पोल
१२माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले गर्यो यस्तो कडा निर्णय, ओली तनावमा
सिमा बिबादबारे ट्रम्पले बल्ल मुख खोले, मोदीलाई नै यतिसम्म भनेपछि भारतभर हंगामा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमामा जारी तनावको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुड ठीक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भारत र चीनको सीमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको पुनः दोहोर्याएका पनि छन् ।
भारत र चीनबीच लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवाद भइरहेको बेला ट्रम्पको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो । बिहीबार ओभलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘म केही सहयोग गर्न सक्छु भने मध्यस्थता गरिदिन तयार छु ।’
एक भारतीय पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘मैले मोदीसँग कुराकानी गरेको थिएँ । दुई देशबीचको तनावलाई लिएर भारत खुसी छैन । शायद चीन पनि खुसी छैन होला । चीनसँग जे भइरहेको छ, त्यसबाट मोदीको मुड ठीक छैन ।’
गत बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गरेर दुवै देशबीच सीमामा जारी तनाव समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘उनीहरुलाई यदि यसबाट सहयोग मिल्छ भन्ने लाग्छ भने म यो काम गर्न सक्छु ।’
ट्रम्पको मध्यस्थताको प्रस्तावबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । तर, चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चीनलाई मध्यस्थताको आवश्यकता छैन ।
भारतले ट्रम्पको मध्यस्थताको प्रस्तावमा कूटनीतिक जवाफ दिएको छ । बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा जारी तनावको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि चीनसँग कुराकानी भइरहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी शान्तिपूर्ण समाधानका लागि चीनसँग सम्पर्कमा छौं ।’
भारत र चीनबीच विवाद किन ?
भारत र चीनबीच चीनमा अवस्थित गलवान उपत्यका नजिक तनाव भइरहन्छ । यो उपत्यका चीनको दक्षिण शियान्जिङ र भारतको लद्दाखसम्म फैलिएको छ । गलवान उपत्यकाको लद्दाख र अक्साई चीनबीच भारत–चीन सीमा नजिक पर्दछ । यहाँको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)ले चीन र भारतलाई छुट्टाउँछ ।
पछिल्लो पटक भारतले गलवान उपत्यका घाटीको किनारमा चिनियाँ सेना टेन्ट लगाएर बसेको आरोप लगायो । भारतले पनि आफ्ना सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढायो । भारतले गलवान उपत्यका नजिक सुरक्षासम्बन्धी ठूलो भौतिक संरचना गैरकानुनीय रुपले बनाएको भन्दै चीनले विरोध गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय उत्तरी सिक्कमको नाथुला क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच झडपसमेत भएको थियो । त्यतिबेला लद्दाखमा सीमा रेखा नजिक चिनियाँ सेनाका हेलिकप्टर देखिएको भारतीय पक्षको भनाइ छ । त्यसपछि भारतले आफ्ना वायु सेना र लडाकु विमानमार्फत् हवाई गस्ती सुरु गरेको थियो ।भारत र चीनबीच जारी तनावलाई अन्त्य गर्न पटक पटक डिभिजनस्तरमा वार्ता भइरहे पनि विफल हुँदै आएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा चीनले आफ्ना सैनिक तैनाथ गर्दा पनि विरोध गर्ने भारतले नेपालको पश्चिमी भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भूभाग भने वर्षौंदेखि गैरकानुनी रुपले कब्जा गरेर सेना राखेको छ ।
पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमिलाई मिचेर लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेको छ । भारतको यो हेपाहा प्रवृत्तिको नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ भने नेपाल सरकारले नेपाली भूमिबाट सैनिक तत्काल हटाउन भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
यस्तै चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन आदेश दिएका छन् । जिनपिङले मंगलबार सेनाका लागि एक आदेश जारी गर्दै पूरा दृढताका साथ देशको सम्प्रभुताको रक्षा गर्न भनेका छन् । जिनपिङले यो आदेश संसद सत्रको क्रममा पिपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए र पिपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्सको प्रतिनिधिको पूर्ण बैठकमा भाग लिने बेला दिएका हुन् ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सिपिसीका महासचिव तथा करिब २० लाख सैनिकका सेना प्रमुख ६६ वर्षीय जिनपिङले सीमामा तनाव बढिरहेको र थुप्रै देश मिलेर चीनलाई निशाना बनाउन तयारी गरिरहेकोले सेनाले खराब स्थितीका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन् ।
जिनपिङको भनाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले भनेको छ, ‘सेनाले सबैभन्दा खराब स्थितीको कल्पना गरेर, त्यसबारे सोचेर युद्धका लागि आफ्नो तयारी र प्रशिक्षणलाई बढाउनुपर्छ र विभिन्न जटिल परिस्थितीसँग तुरुन्त र प्रभावकारी तरिकाले जुध्नुपर्छ । साथै, पूरा दृढताका साथ राष्ट्रिय सम्प्रभुता, सुरक्षा र विकास सम्बन्धि हितको रक्षा गर्नुपर्छ । जिनपिङको यो टिप्पणी लद्दाखमा भारत र चीनबीच करिब २० दिनदेखि जारी गतिरोधको पृष्ठभूमिमा आएको हो ।
यस्तै लद्दाखस्थित सीमा क्षेत्रमा चीनसँग भारतीय सैनिकको यही महिना तीनपटक झडप भइसकेको छ । त्यसैले अहिले चीनले यहाँ आफ्नो सैनिक संख्या ६ हजारले बढाएको छ । भारतले पनि सेना बढाउँदैछ । यस्तोमा सीमा क्षेत्रमा तनाव थप लम्बिने आशंका भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् ।
भारतीय सैनिक स्रोतका अनुसार पूर्वी लद्दाखमा ५ मेइमा भएको झडपमा चीनका सैनिकले भारतीय जवानमाथि लाठी, काडेंतार र ढुंगाले आक्रमण गरेका थिए । न्युज एजेन्सी एनएनआईले सैनिक स्रोतको हावाला दिँदै लेखेको छ, ‘चिनियाँ सेनाको रवैया पाकिस्तान समर्थित ती पत्थरबाजजस्तै थियो, जसले कास्मिरमा भारतीय जवानलाई मार्छन् ।’
भारतीय मिडियाका अनुसार यस क्षेत्रमा चीनको सैनिक संख्या भारतभन्दा ठूलो थियो र यो अनप्रोफेसनल तरिकाले भिडन्तमा उत्रियो । चिनियाँ सेना आक्रामक रहेको आरोप भारतीय सञ्चारमाध्यमले यतिबेला लगाइरहेका छन् । ५ मेइमा पूर्वी लद्दाखको पैंगोन्ग झिलमा साँझ भारत र चीनका २ सय सैनिक आमने–सामने भएका थिए । यस क्रममा दुबैले ढुंगामुडा गरे । पछि, दुबैतर्फका अधिकृतहरुबीच वार्ता भयो र भिडन्त सकियो ।
९ मेमा उत्तरी सिक्किमस्थित १६ हजार फिटको उचाईमा रहेको नाकुला सेक्टरमा भारत र चीनका १ सय ५० सैनिक भिडन्तमा उत्रिए । यस झडपमा दुबैतर्फका गरी कुल १० सैनिक घाइते भए । यहाँ पनि अफिसरहरुले वार्ता गरेपछि समस्या सुल्झियो ।
९ मेमै चीनले लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा आफ्नो हेलिकोप्टर पठायो, चीलने हेलिकोप्टर सीमामा पठाएको थाहा पाएपछि भारतले पनि यहाँ लडाकु विमान पठायो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार धेरै वर्षपछि चीनलाई जवाफ दिनका लागि भारतले सीमा क्षेत्रमा लडाकु विमान पठाएको हो ।
थप २४४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,कति भए डिस्चार्ज ?
४८ घण्टामा क्यान्सर ठीक पार्ने चामत्कारिक औषधि तपाई पनिअनिवार्य थापा उनुहोस
बाढीपहिरोमा परी अहिलेसम्म २२ बेपत्ता यति धेरैकाे मृत्यु, बल्ल खुल्याे यस्ताे रहस्य
मेलम्चीमा राहत वितरणमा यस्ताे लफडा, बाढीपीडित बसेको ठाउँमा प्रवेश निषेध
भारतमा थप ५८ हजार संक्रमित, १ हजार २३९ संक्रमितको मृत्यु
थुनिएको तामाकोशी नदीलाई चिनले यसरी खोलिदिएपछि स्थानीय हर्षित, के भन्छन दोलखाका डिएसपी ?
उपत्यकाकामा सिडिओहरूकाे बैठक बस्दै, कुन-कुन क्षेत्र खुल्ने निषेधाज्ञा केहँदैछ निर्णय ?
असार ९ गतेदेखि दुबई–काठमाडौँ उडान, कहिलेदेखि हुँदैछ टिकट बुकिङ ?
तामाकोशीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम कायमै, सतर्कता अपनाउनू : दोलखा प्रशासन
पूर्व सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर बिष्टको निधन